Kushambadzira Kushandisa kuri Kuchinja kuenda Kutsvaga | Martech Zone
Muvhuro, March 17, 2008 Muvhuro, March 17, 2008 Douglas Karr
Ini ndanga ndichingotaura kudunhu Pfungwa Dzinopinza chiitiko uye kutsanangura Yekutsvaga Injini Dominance muwebhu 2.0. Zvizhinji zvebudiriro rebhizimusi kublogi uye kufamba kunopinda munharaunda midhiya yemakambani kwave kutungamirwa neSainjini Engines. Izvo hazvina kukwana kuvaka saiti inotonhorera uye kumirira kuti iwanikwe - iwe unofanirwa kugadzira yako saiti zviwanikwe uye uwane mamwe masvikiro ekuparadzira shoko.
Heano mamwe zvakakosha zvakatorwa kubva muongororo dzeongororo:
SEMPO yaburitsa ongororo nhasi kumusangano wekutsvaga injini dzekutsvaga. Kunyange hazvo nhamba dzichiita sedzakasimba, uye dzichiratidza chishuwo chekuti vashambadzi varambe vachishandisa mukutsvaga, ongororo yacho haigone kufungidzira mhedzisiro yekushomeka kwekutsvaga kwekutsvaga (kutsvaga) kunokonzerwa nekuderera kukuru kwehupfumi.
Mari dzeKushambadzira dziri Kuchinjisa KUSVIRA
Kutsvaga kwakakomba ndekwekuti kutsvaga kwekushambadzira mari kuri kuwedzera pa iyo inodhura yekudhinda magazini kushambadzira, webhusaiti kuvandudza uye mamwe mabasa ekushambadzira, sevashambadziri vanonyanya kushandura zvikamu zvemari yavo yekushandisa, vachitevera vatengi sezvavanowedzera kuvimba nemajini ekutsvaga kuti vatange kutsvagurudza kwekutenga.
Hezvino zviwanikwa zvakakosha:
Iyo North American SEM indasitiri yakakura kubva pamadhora mabhiriyoni mapfumbamwe emadhora muna9.4 kusvika pamadhora mabhiriyoni gumi nemaviri muna2006, zvichidarika fungidziro dzoya dzamabhiriyoni gumi nemashanu emamiriyoni emadhora muna12.2.
Mari yekuchamhembe kweAmerican SEM yave kufungidzirwa kukura kusvika pamadhora makumi maviri nemashanu emadhora mu25.2, zvichikwira zvakanyanya kubva pamadhora mabhiriyoni gumi nemasere emadhora gore rapfuura.
Vatengesi vari kutsvaga mamwe madhora ekutsvagisa poaching bhajeti kubva kuprinta magazini kushandisa, webhu saiti kusimudzira, yakananga tsamba uye zvimwe zvekushambadzira zvirongwa.
Kubhadhara kwakabhadharwa kunotora 87.4% yekushandisa 2007; organic SEO, 10.5%; yakabhadharwa kubatanidzwa, .07%, uye tekinoroji kudyara, 1.4%.
Google Ads inoramba iri inonyanya kufarirwa kushambadzira chirongwa, asi zvese zviri zviviri Google neYahoo inotsigirwa yekushandisa mari yakadzikira kubva pagore rapfuura.
Tags: f-commercefacebook commercefacebook e-commercefacebook ecommercemultivariate kuyedzamutsikisiSliderspeed monitorkukurumidza kuongororakukurumidza kunetsa
Webhu 2.0 yeBhizimusi Mharidzo
Mar 19, 2008 pa 4: 12 PM
Ini nguva pfupi yadarika ndakaverenga maebook matatu anopa rairo inoshamisa pa kutsvaga kushambadzira mune ino web2.0 nguva uye vese vakasununguka saka ndiudze kana izvi zvisingabatsire vaverengi vako.
Mar 19, 2008 pa 5: 25 PM
Iwe, sezvingabvira, une iyo YEMAHARA saiti yandakamboona. Zviri pachena kuti iwe uri kungoedza kukwezva injini yekutsvaga kune yako saiti nekukanda mashoma machunks ezvinyorwa mukati. Ndinovimba iwe hausi kuyedza kungo chengetedza kune yangu traffic.
Mar 20, 2008 pa 5: 02 PM
My Cj stats haitaure kuti zoemall ndiyo yakasarudzika saiti.Mashoko andakasiya anga achiitirwa kubatsira vaverengi sezvo achienderana nenyaya yepositi yako ... .asi unogamuchirwa kune ako maonero.
Mar 20, 2008 pa 7: 03 PM
Ini ndaingoda kuve nechokwadi kuti wanga usiri kurasa zvinongedzo pasi kuyedza kuwana izvo zvekutsvaga. Ndinokumbira ruregerero nekukutuka uye ndinoonga iwe uchiwedzera pane hurukuro.
Pfungwa yangu pakupindura yaive yekuona shuwa kuti iwe waive 'chaiye' uye kwete imwe spammer. Ndokumbira utarise kuti ini handina kungobvisa chinongedzo - ini ndaida kutarisa kutanga.
Mar 21, 2008 pa 9: 22 PM
Ruzivo rwakanaka kwazvo mune yako posvo. Isu tinokurudzira ese edu ebhizinesi tekinoroji vatengi kuti vatarise pekutanga pakuonekwa kwavo pamhepo, uye kutsvaga ndipo patinotanga. Zvisinei ini ndinofunga pane njodzi mukuchera mari yakawandisa kubva kune mamwe mabasa ekushambadzira, kunyanya kusimudzira webhusaiti. Iine webhusaiti seyimba yehurongwa hwekushambadzira - uye yekushambadzira kwepamusoro tekinoroji izvo zvimwe zvakapihwa - zvinotyisa kuti mangani mawebhusaiti asinganyatso kushanda. (Uye ini handisi webhusaiti webhusaiti.)
Traffic zvirokwazvo ndiyo imwe yemakiyi matatu ekuwedzera mari, uye kushambadzira kwekutsvaga kwakanakira izvi. Asi kugona kushandura iwo traffic kune vatengi ndeyechipiri, yakakosha kiyi kiyi.
Ini ndinoona yako posvo iri kungoendesa ruzivo uye kwete kuita chirevo. Kungoshamisika kuti iwe unofungei.